စနေနေ့စာရင်း — HunterThinks.com စနေနေ့စာရင်း — HunterThinks.com
Posted: 01 September 2018
စနေနေ့တိုင်း, ငါစာရင်းငါ၏အဆေးဝါးများ. ငါနေဆဲရှေ့ဆက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏အလေ့အထကျင့်သုံးနေသောကြောင့်ငါတစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်ဤသို့ပြု: ငါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေချိန်မှာနိုင်ပါတယ်သလောက်, ကင်းမဲ့သော, နှင့်သူတောင်းစား.
ငါရှိသောကြောင့်စနေနေ့ကောက်ယူ, တနင်္လာနေ့, တစ်မက္ကဆီကန်ဆေးဆိုင်ကွင်းဆက်အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုရောင်းချ 25% သွား. ငါငွေအလုံအလောက်ရှိသည်ဆိုလျှင်, ကျွန်မထက်နည်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်မဆေးပညာကိုဝယ် 14 ကျန်ရှိသောရက်ပေါင်း. သောဆေးဝါးများဝယ်ယူရန်ငါ့ကိုနှစ်ခုစီစဉ်ထားတနင်္လာနေ့ပေးသည်, အရာငါသည်အဦးဆုံးသောတနင်္လာနေ့ဆေးဆိုင်ရနိုင်ခြင်းဖြစ်၏လျှင်ဆိုလိုတယ်, ငါအကျပ်အတည်းအခြေအနေမှာမဟုတ်. တစျဖနျ, ငါနေဆဲရှေ့ဆက်စီစဉ်မှာကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းကို: ငါ၏အအကျပ်အတည်းများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုနီးပါးအမြဲရှိပါတယ်.
Alprazolam: ~ 12 ရက် (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
Antacid / ဟောင်း:7ဆေးများ
anti-ဝမ်းလျှော:7ဆေးများ
Bupropion:4ရက်ပေါင်း (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
Diazepam: အဘယ်သူအားမျှ (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
နဲ့ Ibuprofen:6ဆေးများ
L-tyrosine: အဘယ်သူအားမျှ, မက္ကစီကိုဝယ်ခြင်းငှါမဖြစ်နိုင်သလောက် (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
Loratadine: ~ 14 ရက်
Modafinil:6ရက်ပေါင်း (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
Naproxen / lidocaine ဂျယ်: လုံလောက်သော
Omeprazole: ~ 21 ရက်
Venlafaxine:7ရက်ပေါင်း (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
ဗီတာမင် B,: ~ 22 ရက်အတွင်း (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
Vive 100% အားဖြည့်အချိုရည်: နေ့စဉ်ဝယ်ဖို့ (အရေးကြီးသောဆေးဝါး)
ငါကပိုရေးဖို့လိုခငျြ. ကျွန်မအထူးသဖြင့်ငါလိုက်ချင်သောကုထုံးအစီအစဉ်ကိုဖော်ပြရန်လိုချင်. ဒါပေမဲ့, သိပ်အများကြီးဖိအားရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီသေးငယ်တဲ့ပန်းခြံချန်ထားရမည်. ငါအတွင်း၌အိပ်အရမ်းဆင်းရဲသောသူသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးညဥ့်ကဒီမှာအိပ်ပျော်. 1) အဆိုပါနိုက်ကလပ်သည်အထိဂီတတီးခတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကောင်းကောင်းအိပ်မရ7am and because every time someone walked by me, ငါလုယက်ခံရစိတ်ပူခဲ့တယ်သို့မဟုတ်လိင်စော်ကားမှုရှိခဲ့. 2) ငါပိုးသတ်ဆေး mouthwash ကုသဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြတဲ့အလွန်နာကျင် toothache ရှိ. 3) ငါသည်ခပ်သိမ်းသောနံနက်အလွန် nauseous ခဲ့သည်, အရာအလွန်အမင်းပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည်. 4) ယနေ့ငါအလုံအလောက်စားရကြပြီမဟုတ်. 5) ငါအဘို့အလုံလောက်အောင်မစားခဲ့ကြ 10 ရက်ပေါင်း, အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့် toothache ၏. 6) မနေ့ည, တစ်စုံတစ်ဦးကပန်းခြံထဲမှာ defecated. ဒါဟာအသေးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်, နှင့်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုကိုကြီးမားခြင်းနှင့်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်ပြီးအစွမ်းထက်ရှိပါတယ်, မေးခှနျးထုတျပုပ်စပ်သောအနံ့. 7) နေရောင်ကိုမှလွတ်မြောက်ရန်မွန်းတည့်ခြင်းနှင့်မဖြစ်နိုင်ဒါဟာင်: I am hot and getting sunburnt.
ငါ ခဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း အားလုံး သူတို့အားဖိအားများ, ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖိအားကုလားအုတ်ရဲ့နောက်ကျောကိုဖဲ့သောပုံကောက်ရိုးဖြစ်ပါသည်. 8) တစ်စုံတစ်ဦးကလာမယ့်ပန်းခြံ၎င်းတို့၏ကားတစ်စီးရပ်ထား, နှင့်ကားနှိုးဆော်သံ non-stop မြည်. ဒါဟာလောက်မရှိတဲ့အသံကျယ်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ငါ့နား၌နားကြပ်များ, ငါမှာအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူဂီတကိုနားထောင်နေပါတယ် 100%, ငါမူကားငါ့နားထဲကိုနားကြပ်တွန်းမဟုတ်လျှင်, ငါနေဆဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှိုးဆော်သံကိုနားထောငျနိုငျသညျ. ကားကိုပိုင်ဆိုင်သူကအကြောင်းဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်ပါ.
ငါငိုန်းကျင်ထိုင်ကြဘူး, “အသံကျယ်ဆူညံသံမကောင်းတဲ့များမှာ. တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုသိမ်းဆည်းပါ။” ယနေ့ငါ့အသက်ကို၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်. ငါအောင်မြင်စွာကြောက်အိပ်စက်ခြင်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောညဥ့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်, တစ်ဦးကူးစက်သွားရာမှနာကျင်မှု, ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်အစွန်းရောက်ပျို့, အငတ်, ဆင်းရဲသောသူသည်အစာအာဟာရ, တစ်ဦးမိလ္လာကုသမှုစက်ရုံဆင်တူတဲ့အနံ့, အပူ, ငါ့အတှဲနေလောင်ခြင်းမှပိုပြီးနေလောင်ခြင်းဖြည့်စွက်. အဆိုပါကားကိုနှိုးဆော်သံလူအများစုကားမှာရပ်တန့်နှင့်မကွညျ့ကြောင့်လုံလောက်စွာကျယ်လောင်ဖြစ်ပါသည်: ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်အသံကျယ်ဖြစ်ပါသည်.
ငါပြီးသားသူတွေကိုတိကျတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမပေးခဲ့ကြပါလျှင်, အစွန်းရောက်ဆင်းရဲမွဲတေမှု, မျှော်လင့်ချက်မဲ့, အထီးကျန်၏ငါးနှစ်အတွင်း အထီးထီးနေခြင်း, 5HT2A desensitization, hypo-dopamine, ကာ overactive amygdala, ထို့နောက်ကားကိုနှိုးဆော်သံကိုငါ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်.
5HT2A, Alprazolam, စိုးရိမ်ခြင်း, Being alone and loneliness, Bupropion, Caffeine, Coping, စီးပွားပျက်ကပ်, Diazepam, မသန်စွမ်းမှု, အိမ်မဲ့သူ, မျှော်လင့်ချက်မဲ့, Modafinil, Omeprazole, ဆင်းရဲခြင်း, Psilocybin, Robbed, Sexually assaulted, Venlafaxine, Vitamin B complex, သူတို့ကိုအကြောင်းကိုဘာမျှမ
⇐ Dan Hogan to son: Obey me or suffer (part 4) < Previous post | Next post > More crisis ⇒